आउदैंछ जिग्री लिएर डिग्री, छैन कुनै फिक्री ! « Mazzako Online
आउदैंछ जिग्री लिएर डिग्री, छैन कुनै फिक्री !
मज्जाको अनलाईन समाचार, काठमाण्डौं, पौष १८–
पहिलो निर्देशकीय चलचित्र ‘बिर्खेलाई चिन्छस् ‘ बाट निकै राम्रो तारिफ पाएका अराज केशब गिरी अब ‘जिग्री’ लिएर आउने भएका छन् । जिग्री उनले निर्देशन गर्न लागेको चलचित्रको नाम हो । चलचित्रमा कुनै कम्प्रमाईज नगरिने बताउदै उनले भने- ‘मेरो जिग्री फिल्मी ग्रामरको डिग्री पास गरेर मात्रै हलमा आउछ, आशा छ बिर्खेलाई झै जिग्रीलाई पनि बिना फिक्री सबैले साथ दिनुहुनेछ ।’
गायक, संगीतकार, र्यापर तथा रेकर्डिष्टको रुपमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका अराजले यतिबेला चलचित्र निर्देशकको रुपमा पनि नेपाली रजतपटमा राम्रो स्थान बनाउने क्रममा छन् । ‘बिर्खेलाई चिन्छस’ पछि यतिबेला फिल्म नगरीमा उनको चर्चा छ । चलचित्र जिग्रीको कथा पनि स्वयं गिरीले नै तयार पारेका हुन् ।
एक्सन शैलीको रोमान्टिक कमेडी चलचित्र जिग्रीमा कलाकारहरु छनौट भइनसकेको गिरी जानकारी गराउछन् । चलचित्रमा महेश खड्काको संगीत रहनेछ । रोज इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा बन्न लागेको चलचित्र जिग्रीको छायांकन फागुनको दोस्रो साताबाट शुरु गरिने जानकारी गराईएको छ ।